fpo(fpo) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई धितोपत्र बोर्डले एफपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको छ । एनएमबी बैंकको एफपीओ बाँडफाँड भई नेपाल बैंकको एफपीओ नबिकेर चौपट भइरहेको बेला सिटिजन्सलाई प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँको दरले ४ लाख ६३ हजार ८ सय २६ कित्ता एफपीओ निश्कासनको अनुमति दिइएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिटिजन्स बैंकले कुल ९ करोड...
यसरी बाँडफाँड गरियो एनएमबी बैंकको एफपीओ
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकको एफपीओ निश्कासन बन्द भएको ४ दिनमै बाँडफाँड भएको छ । एनएमबी बैंकको मुख्य कार्यालयमा बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषले एक समारोहको आयोजना गरी एफपीओ बाँडफाँड गरेको हो । एफपीओका लागि आवेदन दिएका ६९ हजार ६ सय ४६ मध्ये ६९ हजार ६ सय २६ मात्र योग्य आवेदक बनेका छन् । कुल २० आवेदन रद्ध गरिएको छ । बैंकले प्रिमियमसहित...
अन्ततः एनएमबीको एफपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन, थोरै कित्ताका लागि आवेदन दिनेले सबै पाउने
काठमाण्डौ । अन्ततः अन्तिम अवस्थामा एनएमबी बैंकको एफपीओ संस्थागत लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा उठाएपछि मागभन्दा बढी आवेदन परेको छ । सुरुवाती चरणमा कम आवेदन पर्दै आएको बैंकको एफपीओमा अन्तिम अवस्थामा १५ प्रतिशत बोनस सेयरको प्रभावले माग भन्दा बढी आवेदन परेको हो । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषका अनुसार असार २८ गते(अन्तिम दिन)सम्म...
नेपाल बैंकको सेयर एफपीओ मूल्यमै फालाफाल !
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडको एफपीओलाई अर्को संकट आइलागेको छ । त्यसै पनि दोश्रो बजारमा मूल्य घटेर सकस व्यहोरिरहेको र लगानीकर्ताले नपत्याइदिएपछि बेहाल बनेको यो बैंकको एफपीओ बिक्री हुन अब झनै समस्या हुनेछ । यो बैंकको सेयर दोश्रो बजारमै एफपीओ मूल्यमै पाउन थालिएपछि बैंकले निश्कासन गरेको सेयर बिक्री नहुने गरी संकट आइपरेको हो...
एनएमबीको बोनस प्रस्तावको कमाल: सबै एफपीओ बिक्री हुने संभावना !
काठमाण्डौ । अन्तिम दिनमा आएर एनएमबी बैंकको एफपीओ सबै कित्ता बिक्री हुने संकेत देखिएको छ । एनएमबी बैंकले निश्कासन गरेको प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँ दरको एफपीओमा असार २८ गते(आज) सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताले आवेदन दिने अन्तिम दिन हो । यो दिन एफपीओमा एकाएक अचाक्ली आवेदन परेको देखिएको हो । दिउँसोसम्ममा एफपीओमा ६८ हजार...
एनएमबी बैंकको एफपीओ: भोलिदेखि संस्थापक र संचालकले पनि आवेदन दिन पाउने
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडले निश्कासन गरेको एफपीओमा सर्वसाधारण तथा संस्थागत लगानीकर्ताले आवेदन दिने अन्तिम दिन आज सकिँदैछ । आज कार्यालय समयभित्रसम्म पनि एफपीओ सबै बिक्री नभए भोलि(असार २९)देखि बैंकका संस्थापक, संचालक तथा तिनका परिवारका सदस्यका लागि निश्कासन खुल्ला गरिनेछ । बैंकले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै असार २९ देखि ३२...
काठमाण्डौ । एफपीओ पाउनेले समेत १५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने एनएमबी बैंकको प्रस्तावपछि उसको एफपीओ बिक्री केही तीव्र भएको देखिएको छ । एनएमबी बैंकले जेठ ३० गतेदेखि प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा निश्कासन गरेको एफपीओमा बुधबारसम्म २ अर्ब ७६ करोड बढीको आवेदन परेको हो । बैंकको एफपीओ खरीदका लागि ६६ हजार ३ सय जनाले आवेदन दिएका छन् ।...
एनएमबीको एफपीओमा आवेदन दिने समय अब २ दिन मात्र बाँकी, ३१% अझै बिक्री भएन
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकको एफपीओमा आवेदन दिने समय अब २ दिन मात्र बाँकी रहेको छ । यो अवधिसम्म पनि यो बैंकको सबै एफपीओ बिक्री हुन सकेको छैन । बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषका अनुसार मंगलबार अपरान्हसम्म बैंकको एफपीओमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । कुल ६४ हजार ६ सय ५० आवेदकले एफपीओ खरीदका लागि दरखास्त दिएका हुन्...
नेपाल बैंकको एफपीओको अवस्था झनै दयनीय, नवौ दिन २२५ वटा आवेदन
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले निश्कासन गरेको एफपीओमा आवेदन पर्ने क्रम झनै सुस्त बन्दै गइरहेको छ । यो बैंकले एफपीओ निश्कासन गरेको नवौं दिन सोमबार(असार २५ गते) २२५ वटा आवेदन मात्र परेका छन् । यो दिन २३ हजार ३ सय ९० कित्ता खरीदका लागि आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ । यसरी बैंकको एफपीओमा नवौं दिनसम्म...
नेपाल बैंकको एफपीओमा आवेदन पर्ने क्रम झनै सुस्त !
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले निश्कासन गरेको एफपीओमा आठौं दिनसम्म ३३ करोड ७७ लाख ४४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । कुल ४ अर्ब ९५ करोडको एफपीओमा सातौ दिनसम्म पनि अत्यन्त न्यून आवेदन परेको हो । पछिल्लो समय यो बैंकको एफपीओमा आवेदन पर्ने क्रम निकै सुस्त रहेको छ । बैंकले प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँको दरले असार...
एनएमबीको एफपीओमा आवेदनका लागि ५ दिन बाँकी, सेयरमूल्य बढ्दा सबै बिक्रीको संभावना
काठमाण्डौ । आवेदन दिने अन्तिम समयसीमा पार हुन ५ कार्यदिन मात्र बाँकी छँदा समेत एनएमबी बैंकको एफपीओ बिक्री भएको छैन । बैंकले निश्कासन गरेको ३ अर्ब ८० करोड मूल्यको एफपीओमा शुक्रबारसम्म २ अर्ब ५८ करोडको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । देशभरबाट हालसम्म ६३ हजार ७ सयको हाराहारीमा आवेदनहरु परेका छन् । बैंकले जेठ ३० गतेदेखि प्रिमियमसहित...
नेपाल बैंकको एफपीओ: सात दिनमा ७ % पनि आवेदन परेन
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमीटेडले निश्कासन गरेको एफपीओमा सातौ दिनसम्म ३२ करोड ८५ लाख ६३ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । कुल ४ अर्ब ९५ करोडको एफपीओमा सातौ दिनसम्म पनि अत्यन्त न्यून आवेदन परेको हो । बैंकले प्रिमियमसहित प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँको दरले असार १५ गतेदेखि १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओ निश्कासन गरेको...
छैठौ दिनसम्म पनि नेपाल बैंकको एफपीओमा आवेदनको अवस्था दयनीय नै !
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकको एफपीओ निश्कासन भएको छैठौ दिनसम्म ११ लाख ३६ हजार कित्ता खरीदका लागि आवेदन परेको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार छैठो दिनसम्म नेपाल बैंकको एफपीओमा १० हजार ७ सय ६९ आवेदकले सेयर खरीदका लागि आवेदन दिएका हुन् । बैंकले असार १५ गतेदेखि खुल्ला गरेको ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७६...
नेपाल बैंकको एफपीओ ६ % पनि बिक्री भएन, संस्थागत लगानीकर्ताको पनि कम चासो
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकको एफपीओमा पहिलो चरणको चार दिने अवधिमा अत्यन्त न्यून आवेदन परेको छ । बैंकले असार १५ गतेदेखि खुल्ला गरेको ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८ सय ५८ कित्ता एफपीओमा पहिलो चरणको अन्तिम दिन मंगलबार(असार १९)सम्म २८ करोड ९० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको हो । बिक्री प्रबन्धक...
एनएमबीको एफपीओको के छ हाल ? यस्तो छ अपडेट
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले खुलाएको ३ अर्ब ८० करोडको एफपीओमा सोमबार(असार १८ गते)सम्म २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै आवेदन परेको छ । यो समयसम्म कुल ६५ हजार ८ सय आवेदकले एफपीओ खरीदका लागि आवेदन दिएका हुन् । कुल निश्कासितमध्ये अझै ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा एफपीओमा आवेदन परेको छैन । बैंकले प्रिमियमसहित ३३३ रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले...
अपर अरुण र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक तयार
सेञ्चुरी बैंकका ब्राण्ड एम्बासडरमा पारस खड्का र प्रतिभा माली नियुक्त